Mandray ny fitantanana ny filohan’ny FFKM, ny filohan’ny FLM, ny pasitora Rakotonirina David. Natao omaly tetsy amin’ny katedraly FJKM Analakely ny fifanolorana fitantanana sy faneva.
Tonga nanatrika izany ny lehiben’ny Andrimpanjakana sasany, ny avy amin’ny Antenimierandoholona, ny HCC ary ny ben’ny Tanàna vaovao eto Antananarivo.
Natao teny amin’ny Coliseum Antsonjombe ny fitondrana am-bavaka ny taom-piasana 2020 sy ny filohan’ny FJKM Andriamahazosoa Irako Ammi miaraka amin’ny ankohonany.
… tonga maro ireo mpino FJKM nanotrona izany na teo aza ny fiovaovan’ny toetr’andro.
Tontosaina omaly ny fambolen-kazo, notanterahina teny Firarazana Ankazobe, notarihin’ny filoham-pirenena, Rajoelina Andry. Nanatrika izany koa ny avy amin’ny governemanta sy ny Andriampanjakana ary ireo fikambanana maro samihafa.
Nanatanteraka ny fambelan-kazo ary nampifandraisina tamin’ny Tagnamaro, ny asabotsy sy ny alahady 19 janoary ny eo anivon’ny fianakaviamben’ny minisitera Serasera sy ny kolontsaina. Natao teny Fonenana Imerintsiatosika izany.
Tsy ny basy na kibay na kiririoka ihany no hita eny amin’ny mpitandro filaminana fa ny angady ihany koa. Maro izy ireo no nanefa ny adidiny amin’ny fambolen-kazo, omaly.
Mamiherison sy Fanou